UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Sisanda kukhuluma ngokuthi uSathane usebenzisa kanjani ulwazi ukonakalisa umuntu, ngakho okulandelayo masixoxe ngokuthi uSathane uyisebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa umuntu. Okokuqala, uSathane usebenzisa igama lesayensi ukwenelisa ilukuluku lomuntu, isifiso somuntu ukuhlola isayensi nokuphenya izimfihlakalo. Futhi egameni lesayensi, uSathane wenelisa izidingo zomuntu eziphathekayo kanye nesidingo esikhulu sabantu ukunyusa njalo izinga lempilo yabo. Ngakho-ke uSathane, ngaleli gama, usebenzisa indlela yesayensi ukonakalisa umuntu. Ingabe ukucabanga komuntu noma imiqondo yabantu uSathane ayonakalisayo esebenzisa le ndlela yesayensi? Phakathi kwabantu, izigameko, nezinto ezisezindaweni ezisizungezile esizibonayo nesihlangabezana nazo, yini enye uSathane asebenzisa isayensi ukuyonakalisa? (Imvelo.) Niqinisile. Kubonakala ongathi lokhu kunilimaze kakhulu, futhi kuniphathe kabi kakhulu. Ngaphandle kokusebenzisa konke okutholakele neziphetho zesayensi ezinhlobonhlobo ukukhohlisa umuntu, uSathane ngaphandle kwesizathu usebenzisa isayensi futhi ukudala incithakalo nokuxhaphaza indawo yokuphila umuntu ayinikwa nguNkulunkulu. Ukwenza lokhu ngeqhinga lokuthi uma umuntu enza ucwaningo lwezesayensi, indawo yokuphila yomuntu izoya ngokuya iba ngcono futhi namazinga okuphila abantu azoqhubeka ethuthuka, nokuthi ngaphezu kwalokho, intuthuko yeze sayensi yenziwa ukuhlinzeka izidingo zansuku zonke zomuntu ezikhulayo kanye nesidingo sokulokhu benyusa izinga lempilo yabo. Lokhu kuyisisekelo somcabango kaSathane wokuthuthukiswa kwesayensi. Nokho, yini isayensi eyilethele isintu? Ingabe indawo esihlala kuyo eseduze iquketheni? Akukhona yini ukuthi umoya isintu esiwuphefumulayo ungcolisiwe? Ingabe amanzi esiwaphuzayo asahlanzekile ngempela? (Cha.) Ngabe ukudla esikudlayo kungokwemvelo? Okuningi kwakho kukhuliswa ngokusebenzisa umanyolo futhi kutshalwa kusetshenziswa ukushintshwa kwezakhi zofuzo, futhi kukhona nokuguquka kwezakhi zofuzo okwenzeka ngokusebenzisa izindlela zesayensi ezihlukahlukene. Ngisho imifino nezithelo esizidlayo akusezona ezemvelo. Akuselula manje kubantu ukuthola amaqanda emvelo. Namaqanda awasanambitheki njengoba ayenjalo ngaphambili, asedlule kwinqubo yesayensi-mbumbulu kaSathane. Uma sibuka sekukonke, umkhathi sewuwonke sewonakele futhi wangcoliswa; izintaba, amachibi, amahlathi, imifula, ulwandle, kanye nakho konke okungaphezulu noma ngaphansi komhlabathi konakaliswe yizimpumelelo zalesayensi-mbumbulu. Ngamanye amazwi, sonke isimo sendawo, isimo sokuphila esanikwa isintu uNkulunkulu sesibulewe soniwa yilokhu okubizwa ngesayensi. Nakuba bebaningi abantu abakutholile abebekulindele mayelana nezinga lempilo abalifunayo, benelisa izinkanuko kanye nenyama yabo, indawo lapho umuntu ehlala khona ibhubhile futhi yonakala ngempela “izimpumelelo” ezinhlobonhlobo ezilethwe yisayensi. Manje, asisenalo ilungelo lokuphefumula umphefumulo owodwa womoya ohlanzekile. Ingabe usizi lwesintu lolu? Ingabe isekhona noma iyiphi injabulo umuntu angakhuluma ngayo yomuntu ukuthi aphile kulendawo yokuhlala? Umuntu uphila kulendawo yokuhlala futhi, kusukela ekuqaleni uqobo, lendawo yokuhlala yadalwa uNkulunkulu eyidalela umuntu. Amanzi abantu abawaphuzayo, umoya abantu abawuphefumulayo, ukudla abantu abakudlayo, izitshalo, izihlahla, kanye nezilwandle—lendawo yokuphila yonke uNkulunkulu wayinika umuntu; iyimvelo, isebenza ngokuhambisana nomthetho wemvelo owabekwa nguNkulunkulu. Uma bekungekho isayensi, abantu bebezothokoza futhi bebengajabulela yonke into isesimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni nokuhambisana nendlela kaNkulunkulu nangokuhambisana nalokho uNkulunkulu abanika khona okufanele bakuthokozele.. Manje, nokho, konke lokhu sekumoshwe futhi konakaliswa nguSathane; indawo yomuntu yokuhlala yasekuqaleni ayisekho esimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni. Kepha akekho okwazi ukubona ukuthi yini eyadala lolu hlobo lo mphumela noma ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, futhi ngaphezu kwalokho ngisho abantu abaningi kakhulu baqonda futhi bemukela isayensi ngokusebenzisa imibono egxiliswe kubo nguSathane. Ingabe lokhu akunayo inzondo kakhulu futhi akudabukisi? NoSathane manje esethathe indawo lapho isintu siphila khona nendawo yabo yokuhlala futhi wabonakalisa baba kulesi simo, futhi nesintu siqhubeka sithuthuka ngale ndlela, ingabe sikhona isidingo sesandla sikaNkulunkulu ukuthi siqothule lesi sintu emhlabeni? Uma isintu siqhubeka nokuthuthuka ngale ndlela, ingabe iyiphi indlela esizoyithatha? Ngaphezu kokucinga okunomhobholo komuntu udumo nenzuzo, bayaqhubeka benza ukuhlola kwezesayensi nocwaningo olujulile, bese ngokungaphezi benelisa izidingo zabo eziphathekayo nezinkanuko; ingabe-ke imiphi imiphumela kumuntu? Okokuqala akusekho ukuzimelela phakathi kobudlelwano bezinto eziphilayo kanye nokuzizungezile futhi, okuhambisana nalokhu, imizimba yesintu yonke seyingcolisiwe futhi yalinyazwa yilolu hlobo lwe ndawo, kanye nezifo ezithathelanayo ezininginingi, nobhubhane kubhebhetheke yonke indawo. Lesi isimo umuntu angasenako ukusilawula manje, akunjalo? Manje njengoba senikuqonda lokhu, uma isintu singamlandeli uNkulunkulu, kodwa sihlale silandela uSathane ngale ndlela—siqhubeka sisebenzisa ulwazi ukuzinothisa, sisebenzisa isayensi singaphezi ukuhlola ikusasa lesintu, sisebenzisa lolu hlobo lwendlela ukuqhubeka nokuphila—ingabe uyakwazi ukubona ukuthi isiphetho soqobo sesintu sizoba yini? (Ukonakala.) Kuzoba ukonakala: ukusondela ekonakaleni isinyathelo esisodwa ngesikhathi. Ukusondela ekonakaleni isinyathelo esisodwa ngesikhathi! Kubukeka engathi manje isayensi iwuhlobo lwelumbo eliphuzwayo uSathane alilungiselele umuntu, ukuze kuthi uma nizama ukuqondisisa izinto nikwenze kufasimbe olunenkungu; futhi noma ungazama kangakanani ngeke ukwazi ukuziqonda. USathane, nokho, usasebenzisa igama le sayensi ukulola iphango lakho nokukudonsa ngekhala, unyawo phambi kolunye, ekuyisa ngakwalasha nangasekufeni. Akunjalo? (Yebo.) Lena indlela yesibili.
Manje lezi zinkambiso eziphathelene nabantu zilula kuwena ukuthi uziqonde. Ngikhethe isibonelo esilula nje, isibonelo esivamile ukubonakala futhi abantu abazobe besijwayelwe. Ingabe ke lezi zinkambiso eziphathelene nabantu zinethonya elikhulu kubantu? Ngabe zinomphumela olimaza ngokujulile kubantu? (Yebo.) Umphumela olimaza ngokujulile kakhulu kubantu. USathane usebenzisa enye emuva kwenye yalezi zinkambiso eziphathelene nabantu ukonakalisa ini yabantu? (Unembeza, ukuqonda, ubuntu, ukuziphatha, nendlela umuntu abuka ngayo impilo.) Ingabe zidala ukuphupha kancane kancane kwabantu? USathane usebenzisa lezi zinkambiso eziphathelene nabantu ukuyengela abantu isinyathelo esisodwa ngesikhathi esidlekeni samadimoni, ukuze abantu ababhajwe kulezi zinkambiso eziphathelene nabantu ngokungazi baseke imali kanye nezifiso zokuphathekayo, futhi baseke ukukhohlakala nendluzula. Uma lezi zinto sezingene enhliziyweni yomuntu, ingabe umuntu ube esephenduka eba yini? Umuntu uba uSathane! Lokhu kungenxa yokuncika kuphi komqondo enhliziyweni yomuntu? Ingabe yini umuntu ayisekayo? Umuntu uqala ukuthanda ukukhohlakala nendluzula. Abakuthandi ubuhle nokulunga, kungasaphathwa ukuthula. Abantu abazimisele ukuphila impilo elula yobuntu obujwayelekile, kodwa esikhundleni salokho bafisa ukujabulela isikhundla esiphakeme kanye nengcebo enkulu, ukuzitika ngezinjabulo zenyama, benza konke okusemandleni ukwenelisa inyama yabo siqu, ngaphandle kwezithiyo, kungekho zibopho zokubavimba, ngamanye amazwi benza noma yini abayifisayo. Ngakho uma umuntu esecwile kulezi zinhlobo zezinkambiso, ingabe ulwazi olufundile lungakusiza ukuba ukhululeke? Ingabe isiko lendabuko kanye nezinkolelo-ze ozaziyo zingakusiza ukuthukulula lolu taku olunzima? Ingabe izindlela zesiko zokuziphatha kanye nemikhosi yosiko leyo umuntu ayiqondayo ingamsiza ukuthi azithibe? Thatha Izimilo Ezintathu Ezaziwayo, njengesibonelo. Ingabe ingabasiza abantu ukukhipha izinyawo zabo obhukwini lwalezi zinkambiso? (Cha, ngeke ikwazi.) Ngale ndlela, umuntu uya ngokuya ekhohlakala, eqhosha, ezidla, eyinqonqela, futhi enenzondo kakhulu. Alusekho noma iluphi uthando phakathi kwabantu, alusekho uthando phakathi kwamalunga omndeni, akusekho ukuzwana phakathi kwezihlobo nabangane; ubudlelwano kwabantu sebugcwele indluzula. Wonke umuntu ngamunye ufuna ukusebenzisa izindlela zendluzula ukuphila phakathi komakhelwane babo; bathatha eyabo indlela yokuziphilisa besebenzisa indluzula; bazuza izikhundla zabo futhi bathole izinzuzo zabo ngokusebenzisa indluzula futhi benza noma yini abayithandayo besebenzisa izindlela ezinendluzula futhi ezikhohlakele. Ingabe lobu buntu abusabisi? (Yebo.) Emuva kokuzwa zonke lezi zinto engiqeda kukhuluma ngazo, ingabe awucabangi yini ukuthi kuyesabeka ukuphila kulesi simo, kulo mhlaba, naphakathi kwalolu hlobo lwesixuku, uSathane onakalisa abantu ngakho? (Yebo.) Ngakho nake nazizwa nina qobo nidabukisa? Kufanele ukuthi niyakuzwa lokho kancane manje? (Yebo.) Ngokuzwa isimo sephimbo lenu, kungathi niyacabanga ukuthi “uSathane usebenzisa izindlela eziningi kakhulu ukonakalisa umuntu. Uthatha wonke amathuba futhi ukhona yonke endawo lapho sishona khona. Ingabe umuntu usengasindiswa? Ingabe umuntu usengasindiswa? Ingabe abantu bangazisindisa ngokwabo? (Cha.) Ingabe inkosi yamakhosi uJade angasindisa umuntu? Ingabe uConfucius angasindisa umuntu? Ingabe uGuanyin Bodhisattva angasindisa umuntu? (Cha.) Ngakho ngubani ongasindisa umuntu? (UNkulunkulu.) Abanye abantu, nokho, bazozibuza le mibuzo ezinhliziyweni zabo: “uSathane usilimaza ngolaka kakhulu, ngokungalawuleki kangangokuthi asinalo ithemba lokuphila, noma ikuphi ukuzithemba empilweni. Sonke siphila phakathi kwenkohlakalo futhi wonke umuntu umelana noNkulunkulu futhi, manje futhi izinhliziyo zethu sezicwile phansi kakhulu. Manje ngesikhathi uSathane esonakalisa, ingabe ukuphi uNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu wenzani? Noma yini uNkulunkulu asenzela yona, asiyizwa!” Abanye abantu ngokungenakugwemeka bezwa bedumele futhi ngokungenakugwemeka bazizwa benokudangala, akunjalo? Kinina, lo muzwa ujule kakhulu ngoba konke lokhu ebengikusho bekungoko kwenza abantu ukuthi babe nokuqonda kancane, ukuthi baye bezwa kakhulu ukuthi abanalo ithemba, ukuthi baye bezwa kakhulu ukuthi bafulathelwe uNkulunkulu. Kodwa ningakhathazeki. Isihloko sengxoxo yethu namhlanje, “ukukhohlakala kukaSathane,” akuyona indikimba yethu yangempela. Ukukhuluma ngomongo wobungcwele bukaNkulunkulu, nokho, kufanele siqale sikhulume ngokuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu kanye nokukhohlakala kukaSathane ukwenza kucace kakhulu kubantu ukuthi uhlobo olunjani lwesimo umuntu akusona manje. Enye inhloso yokukhuluma ngalokhu ukuvumela abantu ukuthi bazi ukukhohlakala kukaSathane, kanti enye ukuvumela abantu ukuthi baqonde ngokujule kakhulu ukuthi ubungcwele bangempela buyini.
Esigabeni samanje somsebenzi kaNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina, akasaniki nje umusa nezibusiso kumuntu njengoba ayenza phambilini, noma ancenge abantu ukuthi baqhubeke. Ngalesi sigaba somsebenzi, ingabe yini umuntu ayibonile kuzo zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu asebedlule kuzona? Ubone uthando lukaNkulunkulu nokwahlulela nokujezisa kukaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu ngaphezu kwalokho uyahlinzeka, eseke, akhanyisele, futhi aqondise umuntu ukuze kancane kancane baqale ukwazi izinjongo Zakhe, bazi amazwi Awakhulumayo kanye neqiniso Alinika umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho edangele, lapho bengazi ukuthi bashone kuphi, uNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe ukubaduduza, ukubeluleka, nokubakhuthaza, ukuze umuntu onesiqu esincane athole amandla kancane kancane, aphakame abe nomoya omuhle owakhayo futhi azimisele ukubambisana noNkulunkulu. Kodwa uma umuntu engalaleli uNkulunkulu, noma emelana Naye, noma uma eveza ukukhohlakala, uNkulunkulu ngeke amkhombise umusa ekumjeziseni nokumqondisa. Ebuwuleni, ukungabi nolwazi, ubuthakathaka nokungavuthwa komuntu, nokho, uNkulunkulu ukhombisa ukubekezelelana nesineke. Ngale ndlela, ngawo wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzela umuntu, kancane kancane umuntu uyavuthwa, uyakhula, aqale ukwazi izinjongo zikaNkulunkulu, ukwazi iqiniso elithile, ukwazi ukuthi iziphi izinto ezinhle, futhi iziphi izinto ezingezinhle, ukwazi ukuthi yini inkohlakalo nokuthi yini ubumnyama. UNkulunkulu akamjezisi futhi amqondise umuntu njalo, noma akhombise ukubekezelelana nesineke njalo. Kunalokho, Uhlinzekela umuntu ngamunye ngezindlela ezihlukene, ezigabeni zabo ezihlukene kanye nangeziqu nezinga labo elihlukene. Wenzela umuntu izinto eziningi futhi ngenani elikhulu; umuntu akaqondi luthi ngalezi zindleko noma lezi zinto uNkulunkulu azenzayo, kepha konke Akwenzayo kwenziwa kumuntu ngamunye. Uthando lukaNkulunkulu olwangempela: Ngomusa kaNkulunkulu umuntu ugwema inhlekelele emuva kwenye, kulapho ebuthakathakeni bomuntu uNkulunkulu ukhombisa ukubekezelelana ngokuphindelela. Ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuvumela abantu ukuthi kancane kancane babone ukukhohlakala kwesintu kanye nengqikithi yobusathane. Lokho uNkulunkulu akuhlinzekayo, ukukhanyisela Kwakhe umuntu nokuqondisa Kwakhe konke kuvumela isintu ukuthi sazi kabanzi ingqikithi yeqiniso, futhi sikhule ekwazini ukuthi yini abantu abayidingayo, iyiphi indlela ekufanele bayithathe, ukuthi yini abayiphilelayo, ukubaluleka nenjongo yezimpilo zabo, nokuthi bayihambe kanjani indlela engaphambili. Zonke lezi zinto uNkulunkulu azenzayo azinakuhlukaniswa nenhloso Yakhe eyodwa yasekuqaleni. Ingabe yini, ke, le nhloso? Kungani uNkulunkulu esebenzisa lezi zindlela ukwenza umsebenzi Wakhe kumuntu? Ingabe imuphi umphumela Afuna ukuwuthola? Ngamanye amazwi, ingabe yini Afuna ukuyibona kumuntu nokuyithola kubo? Lokho uNkulunkulu afuna ukukubona ukuthi inhliziyo yomuntu ingavuseleleka. Lezi zindlela azisebenzisayo ukusebenza kumuntu ezokuphaphamisa inhliziyo yomuntu njalonjalo, ukuphaphamisa umoya womuntu, ukwenza umuntu azi ukuthi bavelaphi, ubani obaholayo, obasekayo, obahlinzekayo, futhi ovumele umuntu ukuthi aphile kuze kube manje; ezokwenza umuntu ukuthi azi ukuthi ubani uMdali, ekufanele bakhuleke kuye, indlela enjani ekufanele bayihambe, nokuthi ingayiphi indlela umuntu ekufanele eze phambi kukaNkulunkulu ngayo; zisetshenziswa ukuvuselela inhliziyo yomuntu kancane kancane, ukuze umuntu azi inhliziyo kaNkulunkulu, aqonde inhliziyo kaNkulunkulu, futhi aqonde ukunakekela nokucabanga okukhulu okusemuva komsebenzi wokusindisa umuntu. Uma inhliziyo yomuntu seyivuselelwe, abasafuni ukuphila impilo yesimo esiphuphile, esikhohlakele, kodwa esikhundleni salokho bafisa ukufuna iqiniso ukwenelisa uNkulunkulu. Uma inhliziyo yomuntu seyiphapheme, ilapho bekwazi ukuphuma baphele kuSathane, bengeke besalinyazwa uSathane, bengeke besalawulwa noma bakhohliswe nguye. Esikhundleni salokho, umuntu angabambisana emsebenzini kaNkulunkulu kanye nasemazwini Akhe ngendlela enhle ukwenelisa inhliziyo kaNkulunkulu, ngalokho athole ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi. Lena inhloso yasekuqaleni yomsebenzi kaNkulunkulu.
Eyesithupha ukubhujiswa komzimba nomqondo. Yini uSathane ayibhubhisayo yomuntu? (Umqondo wabo, nobubona sebubonke.) USathane ubulala umqondo wakho, akwenze ungabi namandla okulwa, okusho ukuthi kancane kancane inhliziyo yakho iphendukela kuSathane noma ungafuni. Ugxilisa lezi zinto kuwe zonke izinsuku, zonke ezinsuku usebenzisa le mibono namasiko ukukuthonya nokukufundisa, eqothula intando yakho kancane kancane, ekwenza ukuthi ungabe usafuna ukuba umuntu olungile, ekwenza ungabe usafisa ukumela lokho okubiza ngokuthi ukulunga. Ngokungazi, awusenawo amandla okubhukuda uphambane nebuya, kodwa kunalokho uhambisana nalo. “Ukubhubhisa” kusho ukuthi uSathane uhlupha abantu kangangokuba baze babe yizithunzana nje zababeyikho, bengaseyibo abantu. Kulapho uSathane egalela khona, ebabamba futhi ebashwabadela.
Singasho ukuthi uSathane ukhohlakele, kodwa ukuze sikuqinisekise kusamele sibheke ukuthi ingabe yimiphi imiphumela yokonakalisa umuntu kukaSathane nokuthi iziphi izimo nezingqikithi okuziletha kumuntu. Nonke niyakwazi okunye kwalokhu, ngakho khulumani ngakho. Uma uSathane esonakalise umuntu, ingabe iziphi izimo ezinobusathane umuntu azikhombisayo nazivezayo? (Uyaqhosha futhi uyazidla, unobugovu futhi uyanyanyisa, unobugwegwe nokukhohlisa, unomshoshaphansi futhi unenzondo, futhi akanabo ubuntu.) Sekukonke, singathi akanabo ubuntu, akunjalo? Dedela abanye abafowethu nodadewethu bakhulume. (Uma umuntu esonakalisiwe uSathane, ngokuvamile kakhulu uyaqhosha futhi uyazikhukhumeza, uzibona elungile, ebalulekile, eziqhenya, enomhawu futhi ezicabangela yena. Lezi yilezo ezinzima kakhulu.) (Emuva kokuthi umuntu esonakaliswe uSathane, akavinjwa lutho ekufuneni ukuzuza izinto eziphathekayo nomcebo. Ube eseba nobutha noNkulunkulu, alwe noNkulunkulu, angamlaleli uNkulunkulu futhi ulahlekelwa unembeza nomqondo umuntu okufanele abenawo.) Lokho enikushilo konke kuyafana impela nomehluko ongatheni kuphela, futhi abanye benu bazihlupha kakhulu ngemininingwane engatheni. Ukubeka kafushane, ukuthi “bayaqhosha” kube igama elivame ukushiwo kakhulu—bayaqhosha, banenkohliso, banenzondo futhi banobugovu. Kodwa nonke aninakanga into efanayo. Abantu abangenawo unembeza, asebelahlekelwe umqondo futhi abangenabo ubuntu—kusekhona okuthile nakho okubalulekile okungekho noyedwa phakathi kwenu okushilo. Lokho ukukhaphela. Umphumela wokugcina walezi zimo ezibakhona kumuntu uma esonakaliswe uSathane ukukhaphela kwabo uNkulunkulu. Akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu uthini kumuntu noma imuphi umsebenzi awenzayo kubo, abakunaki lokho abakwaziyo ukuthi kuyiqiniso. Okungukuthi abasamvumi uNkulunkulu futhi bayamkhaphela; lokhu kuwumphumela wokonakalisa umuntu kukaSathane. Kuyefana nowazo zonke izimo ezonakalisiwe zomuntu. Phakathi kwezindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu—ulwazi umuntu alufundayo, isayensi abayaziyo, izinkolelo-ze, amasiko endabuko kanye nezinkambiso eziphathelene nabantu abaziqondayo—ingabe ikhona noma eyiphi umuntu angayisebenzisa ukubona ukuthi yini elungile nokuthi yini engalunganga? Ingabe kukhona noma yini engasiza umuntu ukuthi azi ukuthi yini engcwele nokuthi yini embi? Ikhona imigomo? (Cha.) Ayikho imigomo noma isisekelo esingasiza umuntu. Ngisho noma abantu belazi igama “ngcwele,” akekho owaziyo ngempela ukuthi yini engcwele. Ngakho ingabe lezi zinto uSathane aziletha kumuntu zingakwazi ukubavumela ukuba bazi iqiniso? Ingabe zingakwazi ukuvumela umuntu ukuthi aphile ngobuntu obukhulayo? Ingabe zingabavumela abantu ukuthi baphile izimpilo lapho bekhula ekwazini ukukhonza kuNkulunkulu? (Cha.) Kusobala ukuthi ngeke zimvumele umuntu ukuthi akhonze uNkulunkulu noma aqonde iqiniso, futhi ngeke zimvumele umuntu ukuthi azi ukuthi buyini ubungcwele nobubi. Kunalokho, umuntu uya ephupha kakhulu, uya eqhelelana noNkulunkulu. Lesi isizathu esingemuva kokuthi sithi uSathane mubi. Sesizicwiyile izici eziningi impela zikaSathane ezikhohlakele, nike nabona uSathane eba nanoma iyiphi ingxenye yobungcwele noma ezicini zakhe noma ekuqondeni kwenu kwengqikithi yakhe? (Cha.) Kunjalo impela. Ngakho-ke ingabe nike nabona noma iyiphi ingqikithi kaSathane enanoma ikuphi ukufana noNkulunkulu? (Cha.) Ingabe kukhona noma ikuphi ukubonakaliswa kukaSathane okunanoma ikuphi ukufana noNkulunkulu? (Cha.) Ngakho manje ngifuna ukunibuza, nisebenzisa amagama enu siqu, ingabe yini empeleni ubungcwele bukaNkulunkulu? Okokuqala nje, ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu bushiwo mayelana nani? Ingabe bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu? Noma ingabe bushiwo mayelana nengxenye ethile yesimo Sakhe? (Bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu.) Kumele sithole isikhundla esicacile esihlokweni sethu esisikhethile. Bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu. Okokuqala nje sisebenzise ukukhohlakala kukaSathane njengesiqhathaniso sengqikithi kaNkulunkulu, ngakho uke wakubona okwengqikithi kaSathane kuNkulunkulu? Uthini ngengqikithi yesintu? (UNkulunkulu akaqhoshi, akanabo ubugovu, futhi akakhapheli, futhi kule ngxenye ingqikithi engcwele kaNkulunkulu ibonakala yembulwa.) Bakhona abanye abanganezezela? (UNkulunkulu akanalo nezwibela lesimo esikhohlakele sikaSathane. Lokho uSathane anakho okungekuhle konke, kanti lokho uNkulunkulu anakho kuhle kuphela. Siyabona ukuthi kusukela lapho sasibancane kakhulu kuze kube manje, ikakhulukazi ngezikhathi lapho sasilahlekelwe indlela yethu, uNkulunkulu ubehlala eseduze kwethu, esibhekile futhi esigcina siphephile. Akukho nkohliso kuNkulunkulu, akukho ukuphamba. Ukhuluma ngokucacile nangokusobala, futhi lokhu nakho kuyingqikithi yangempela kaNkulunkulu.) Kuhle kakhulu! (Asiboni lutho lwesimo esikhohlakele sikaSathane kuNkulunkulu, akukho ukuba mbaxambili, akukho ukuzigabisa, azikho izithembiso eziyize futhi ayikho inkohliso. UNkulunkulu uyena Yedwa umuntu angakholelwa Kuye futhi umsebenzi kaNkulunkulu uthembekile futhi uqotho. Emsebenzini kaNkulunkulu siyambona uNkulunkulu etshela abantu ukuthi bathembeke, ukuthi babe nokuhlakanipha, ukuthi bakwazi ukuhlukanisa kubantu, izigameko, nezinto ezahlukahlukene. Kulokhu singabona ubungcwele bukaNkulunkulu.) Ingabe seniqedile? Ingabe nenelisekile ngalokho enikushilo? Kungakanani ukuqonda uNkulunkulu okusezinhliyweni zenu ngempela? Futhi ingabe nibuqonda kangakanani ubungcwele bukaNkulunkulu? Ngiyazi ukuthi yilowo nalowo kini unalo izinga elithile lokuqonda okuzwakalayo, ngoba wonke umuntu ngamunye uyezwa umsebenzi kaNkulunkulu phezu kwabo futhi, ngamazinga ahlukahlukene, bathola izinto eziningi kuNkulunkulu; bathola umusa nezibusiso, bayakhanyiselwa futhi bayakhanyiswa, futhi bathola ukwahlulela nesijeziso sikaNkulunkulu ukuze umuntu abenokuqonda okulula ngobuyena bukaNkulunkulu.
Okulandelayo：UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VII